इन्टरनेट को युग मा ग्राहक उपेक्षित हुन सक्दैन | Martech Zone
इन्टरनेटको युगमा ग्राहक उपेक्षित हुन सक्दैन
बिहीबार, फेब्रुअरी 4, 2010 शनिबार, नोभेम्बर ०,, २०२० लोरेन बल
पच्चीस बर्ष अघि, कम्पनीहरु जसले ग्राहकहरु को उम्मीद को लागी बाँच्न असफल भयो अक्सर ग्राहकबाट रिस उठ्ने पत्र प्राप्त हुन्छ। तिनीहरूको ग्राहक सेवा विभागले पत्र बेवास्ता गर्न सक्दछ, र त्यो कहानीको अन्त हुनेछ।
ग्राहकले केहि साथीहरूलाई बताउन सक्छ। धेरै जसो ठूलो कम्पनीहरूले एयरलाइन्सहरू गरिब सेवा पुर्‍याउन सक्दछन्। उपभोक्ता भएको नाताले हामीसँग उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन केही शक्ति छ।
तर सामाजिक नेटवर्कहरू, छलफल बोर्डहरू, ट्विटर, र युट्यूबको आगमनसँगै टेबलहरू बदलिएका छन्। तलको भिडियो उपभोक्ताको आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नेको मेरो मनपर्ने उदाहरणहरू मध्ये एक हो। युनाइटेड एयरलाइन्सले संगीतकार डेभ क्यारोलको गितार बिगार्‍यो। नौ महिना क्षतिपूर्ति खोजे पछि, उसले हार माने। उसले एउटा गीत लेख्यो र एक भिडियो सिर्जना गर्‍यो जुन 73 41,000 मिलियन भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। ,25,000१,००० रेटिंग्स र २,XNUMX,००० टिप्पणीका साथ उनले उपभोक्तालाई शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखाउँदै केही साथीहरू भन्दा बढीसम्म पुग्न सक्षम भएको छ।
यो एयरलाइनको लागि सार्वजनिक सम्बन्ध दुःस्वप्न हो, यसलाई रोक्नको कुनै उपाय बिना। भिडियोको साथसाथै, मैले blog०,००० भन्दा बढी लेख सूचीकरण र ब्लग पोष्टहरूमा र समाचार साइटहरूमा लिंकहरू भेट्टाउँदछु Huffington पोस्ट गर्न न्यूयोर्क टाइम्स,
'त्यसोभए युनाइटेड एयरलाइन्सले के गर्नुपर्छ? कसरी ठूलो कम्पनीले प्रतिक्रियाको लागि सोशल मिडिया प्रयोग गर्दछ? एक पटक भिडियो was 1,200 रिलीज भएको थियो जसले समस्यालाई छ महिना अघि हराउनेछ, पर्याप्त थिएन। श्री क्यारोल वर्णन गरे अनुसार: मँ धेरै समय क्रोधित भइरहेको छु र, केहि पनि भएमा, मैले संयुक्तलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। उनीहरूले मलाई एक रचनात्मक आउटलेट दिएका छन् जसले विश्वभरका मानिसहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ।
खैर, एक संगीतकारको रूपमा मध्यम मात्र सफल, गीतले श्री कैरोललाई एक रातको सफलतामा परिणत गरेको छ, एक आशाजनक क्यारियरको साथ ग्राहक सेवाको बारेमा समूहहरूसँग कुरा गर्ने।
टैग: डेव क्यारोलसामाजिक संजालएकीकृतसंयुक्त एयरलाइन्सयुनाइटेड ब्रेट गिटार
किन Google Doe Care n मतलब गर्दैन
सरल जीवन सफल जीवनको कुञ्जी हो